यी ३ राशि भएका युवतीहरुसँग भुलेर पनि नगर्नुस् प्रेम ! कहिले पनि सफल हुँदैन ! – MediaNP
शुक्रबार, १६, फागुन, २०७६
यी ३ राशि भएका युवतीहरुसँग भुलेर पनि नगर्नुस् प्रेम ! कहिले पनि सफल हुँदैन !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०१०:०१0
काठमाडौँ । आज भोलीका धेरै युवायुवतीहरु फेसबुकको माध्यमबाट प्रेममा परेका हुन्छन् । प्रविधीको तीव्र विकाससँगै फेसबुकको मायाले कसैलाई निकै फाइदा गरेको छ । अर्कोतर्फ फेसबुकले प्रेम धेरैलाई बेफाइदा पनि पुयाएको छ । किनभने आजभोलीको केही युवायुवतीहरुको प्रेम विवाहमा परिणत भएको छ । तर कसैको सम्बन्ध विच्छेद भएर आत्माहत्या गरेको उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् ।
तर हरेक पुरुषहरु एक युवतीसँग प्रेममा परेपछि त्यही युवतीसँग विवाह होस् र जीवनभर साथ पाइयोस भन्ने चाहन्छन् । तर कोही सम्बन्ध प्रेममा परेको छोटो समयमै छुटेर जान्छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार यसको मुख्य कारण युवतीहरुको राशीको प्रभाव हो । किनभने १२ वटा राशीमध्ये यी ३ राशी भएको युवतीहरुसँग प्रेम गर्दा कहिले पनि सफल हुदैँन् । हेर्नुस् कुन कुन हुन् ती राशी ?
पुरुषहरुको मेष राशी भएका युवतीहरुसँग लामो समयसम्म प्रेम सम्बन्ध रहन सक्दैन् । किनभने यो राशी भएको युवतीहरु आफ्नो स्वार्थको लागी फाइदा मात्र हेर्ने हुन्छन् । जसले गर्दा पुरुषले यो राशी भएका युवतीहरुसँग विवाह गर्नु राम्रो मानिदैन् ।
कन्या राशी भएका युवतीहरु पनि एकै पुरुषसँग लामो समयसम्म प्रेममा रहन सक्दैन् । किनभने यो राशी भएकाहरुको स्वाभाव धेरै जिद्दी र रिसालु हुन्छ । जसले प्रेममा चिसोपना ल्याउँछ ।
कुुम्भ राशी भएको युवतीहरुसँग पनि पुरुषहरुको प्रेम सम्बन्ध लामो समयसम्म रहदैन् । किनभने यो राशी भएका युवतीहरुको बालकको जस्तै इच्छा र चाहना बढी हुन्छ । तर यो राशीका युवतीहरु प्रमीलाई धेरै माया गर्ने भएतापनि बच्चाको जस्तो बानी व्यवहारले पुरुषहरुले खासै मन पराउदैनन् ।
बोइङ: ठूला दुर्घटना हुनुभन्दा पहिला नै ७३७ म्याक्स विमान समस्याग्रस्त भएको थाहा पाएको स्वीकार
संसारकै5डरलाग्दो रहस्यमय टापू (भिडियो सहित)
रिभाल्डोको दावीः नेयमार नफर्काइ बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिग जित्दैन !
बार्सिलोनाले पिएसजीलाई डेम्बेले दिएर नेयमार फर्काउने ! भालभर्डेलाई नहटाउने